यस गीतमार्फत हेर्नुहोस् खप्तडको सुन्दरता ! - ParyatanBazar.com
यस गीतमार्फत हेर्नुहोस् खप्तडको सुन्दरता !
असोज १८ ,काठमाडौँ। सुदुरपश्चिममा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडमा छायांकन भएको “जीवन फुल्ने मेरो लहरा हो केवल तिमी हौ, भरि दिने पहरा हो केवल तिमी हौ ” म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । एक महिना अघि सुटिङ भएको सो म्युजिक भिडियोमा मोडेल पल शाह र गरिमा शर्माले अभिनय गरेका छन् ।
राजकुमार र राजकुमारीको प्रेमलिला हेर्न मिल्ने सो म्युजिक भिडियोले मोडल, पर्यटकीय क्षेत्र, शव्द र लयका कारण अत्याधिक दर्शकको माया पाउने विश्वास गायक सुनिल गिरीको छ । सो गीतमा गिरी र डा. त्रिशला गुरुङले स्वर रहेको छ । गीतको शव्द र संगित पनि गायक गिरीकै रहेको छ । म्युजिक भिडियोको छायांकन र निर्देशन अनिल के मानन्धरले गरेका छन् ।
भर्जिनल्याण्डकारुपमा रहेको खप्तडको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन उद्धेश्यले समेत सो क्षेत्रमा छायांकन गरिएको गायक गिरीको भनाइ छ ।खप्तड पुग्न निक्कै कठिन छ तर हामीले निर्माण गरेको म्युजिक भिडियो हेरेपछि गएकालाई थकाई र दुःख विर्साउने छ भने नगएकालाई खप्तड जाउजाउ भन्ने लाग्ने छ सुटिङबाट फर्किएपछि मोडेल पल शाहले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
गायक गिरी १२ जना काठमाडौ र १० जना बझाङबाट लिएर खप्तड पुगेका थिए । राष्ट्रिय स्तरका कलाकार गएर खप्तडमा सुटिङमा गरेको सम्भवत यो पहिलो म्युजिक भिडियो हो । सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा चर्चित देउदा गीतका सुटिङ भने धेरै भएका छन् ।